Maitiro Ekumepu Yako Vatengi Nzendo | Martech Zone
Maitiro Ekumepu Yako Vatengi Nzendo
Chipiri, January 24, 2017 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Kufambira mberi kukuru mukushambadzira ongororo uye zvinyorwa ndiko kubuda kwe vatengi mamamepu kubatsira gwaro, kuyera, uye kugadzirisa kushambadzira kwako kugona - kunyanya online
Iyo mepu yevatengi rwendo mepu maitiro aunofungidzira ako evatengi ruzivo neako brand. Iyo mepu yevatengi rwendo mepu inonyora ako evatengi 'ekubata mapoinzi online uye isina internet uye zvinyorwa maitiro aunoyera imwe yega yekubata points kushanda Izvi zvinogonesa vashambadziri kuti vanzwisise zvirinani kuti vatengi vari kusangana sei newe kuitira kuti iwe ugone kukwidziridza rwendo rwevatengi, kubvisa zvimisikidzo nemigwagwa, kuitira kuti uwedzere kugutsikana kwevatengi, kuita, kushandurwa uye mikana yekuwedzera.
Kusiyana nemakasitoma funnel ayo ane mutsetse, nzendo dzevatengi dzinogona kuratidza nzira dzinoverengeka pane apo vatengi varikuita sarudzo uye nekuita nekudyidzana kwechiratidzo. Mamepu evatengi emamepu anogona zvakare kubatsira yako yekutengesa timu kuti itarise kushambadza kwako uye zvemukati kuvandudza kune chaiwo vatengi vatengi. Nepo vatengi vako vangave vane zvisingaperi kutenderera uye kutendeuka, pane zvakajairika nzira dzakafanana iwe uchaona kuti vatengi vari kufamba pasi (kana kuti iwe unovatarisira kuti vafambe pasi).
85% yevatengesi vepamusoro-soro vanotenda kuti zvakakosha kuti vagadzire rwendo rwevatengi, asi chete 40% vanoshandisa izwi rekuti rwendo rwevatengi. Chete 29% emakambani emabhizinesi anozvimisikidza iwo anoshanda mukugadzira rwendo rwevatengi.
Unganidza iripo data yekuongorora kubva pawebhusaiti yako analytics, kushambadzira chikuva, CRM, data rekutengesa, uye zvimwe zviwanikwa.
Unganidza anecdotal dhata kubva pasocial media yekutarisa uye yevatengi mhinduro kune yekufukidza manzwiro uye kukosha kune yako analytical data.
Sanganisa iwo data poindi muzvikamu mukati meiyo nguva (musana) iyo inosanganisa iko kufambidzana senge kubvunza, kuenzanisa, uye sarudzo. Sanganisira yako yekushambadzira kuyedza pane yega poindi.
Dudzira iyo data uye ongorora yega yega nhanho kana yekubata kuti rwendo ruve nyore, nekukurumidza, kana kunakidza.
Salesforce yakaburitsa ino yakanaka infographic, Vatengi Rwendo Mepu: Maitiro Ekutungamira Eko Anotungamira Kune Vatengi, Kufananidza maitiro ekunyora nzendo dzako dzevatengi, kutsanangura nhanho yega yega, uye kushandisa metriki dzakakodzera kune yega yega matanho.
Ziva Rwendo rweVatengi paSalesforce
Tags: kuongorora data revatengivatengi data datarwendo rwevatengivatengi mamamepumepu yevatengivatengi vanobatatungamiriraguidessei kutikuenzanisira data revatengisalesforcechii